မှတ်တိုင်သစ်...: မင်းကိုနိုင်မိသားစုထံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် တွေ့ဆုံ
မင်းကိုနိုင်မိသားစုထံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် တွေ့ဆုံ
Sunday, September 11, 2011 4:05 PM | Posted by Unknown
စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နေ့လယ် ၁၂း၁၅ မှ ၁း၃၀ အထိ မင်းကိုနိုင်၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်ကာ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အားပေးစကားများ ပြောကြားခဲ့သည်။
0 Comments to မင်းကိုနိုင်မိသားစုထံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် တွေ့ဆုံ
၂၀၁၂ ဂင်းနက်စ်မှတ်တမ်း စာအုပ်
အင်းလေးကန် နှင့် ယူရိုမော်ဒယ်
(2.9.2011) RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ လူထုနှင့်ဒေါ်အောင်...
“Hey Exiles ! Come on back There’s lots of space!”...
But when they bite it makes me cry!
“အန်တီ မှားခဲ့ရင်၊ ကျရှုံးခဲ့ရင် အန်တီတာဝန်ယူမယ်”
မြန်မာပြည်မှာ ကလေးသူငယ် လူမမယ် မလေးကို ညှင်းပန်းနှ...
စစ်တွေမှာ ဦးဥတ္တမနေ့ လုပ်ခွင့်ရ
"Nature Kids" by Sai Htee Saing
မင်းကိုနိုင်မိသားစုထံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်...